I-Forex Forecast Poll - I-Currency Forecast Poll
Ikhaya / Ukuhweba / Ama-forex Amathuluzi / I-Currencies Forecast Poll
I-Currencies Forecast Poll yakho
I-Forecast Poll iyithuluzi lokuzwa eliveze ukulindela kwamanani entengo okuphakathi okuvela kubachwepheshe bemakethe abaholayo.
Isikhombisi se-poll sentiment sentiment siza nomlando weminyaka emihlanu ehlobene nezinkampani eziyishumi ezinkulu zezimali ze-FX. Ucwaningo lubanjwa njalo ngoLwesihlanu futhi lushicilelwe ku-15: 00 GMT. Ucwaningo lwenyatheliswa kuzo zonke izikhathi zesikhathi: isonto elilodwa, inyanga eyodwa, ingxenye eyodwa futhi kufaka inani lentengo ngesikhathi ngasinye. Le ngqungquthela ingalandelwa abahwebi, abahlaziyi bemakethe nabafundi abahola phambili.
Ngalesi iwijethi, amaklayenti ethu athola umkhiqizo ohlukile. Kuyinto inkomba yokuzwa eveza ochwepheshe akhethiwe 'eduze nesikhathi medium medium futhi ubala amathrendi. Akufanele kuthathwe njengesignali noma njengenhloso yokugcina, kodwa njengamabala okushintshaniswa 'imephu yokushisa lapho kukhona khona imizwa nokulindela.
Akunakho ukugoba kwedatha; izibikezelo zihlanganisiwe bese zikhishwa ngokushesha, njengendlela yokukhomba ayihambanga, akukho ukubambezeleka. Ngakho-ke lokhu kuyithuluzi eliwusizo kakhulu uma kuhlanganiswe nezobuchwepheshe, noma idatha yokuhlaziywa eyisisekelo.
Le poll yokubikezela inikeza idatha yokuzwa, esekelwe kwisampula esimeleyo sabeluleki abahamba phambili abangama-20 kuya ku-50, ngaphezulu kwefasitela leminyaka emihlanu.
Abahwebi babonisa izici ezifanayo ekuziphatheni komuntu ezindaweni eziningi; ngokwemvelo isisusa ukulandela isixuku samakethe. Izinkomba zenzwa, noma kunjalo, zingakhuthaza ukucabanga kwe-contrarian. Ukusebenzisa la maklayenti amathekisthi kungabonakalisa ukungathí sina kwemizwa ngakho-ke ugweme ukubanjwa emqondweni.
I-Currencies Forcast Poll